Arthur's Pass alpine ukubaleka
Arthur's Pass, Canterbury, i-New Zealand
I-chalet esanda kulungiswa endaweni yase-Arthur's Pass - ipharadesi labahamba ngezinyawo, abahamba ngezinyawo. Buyela endaweni efudumele futhi ethokomele ngemva kokuqwala izintaba, ukushushuluza, ukudoba noma ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni e-Arthur's Pass noma emapaki ezwe amaningi aseduze.
I-chalet isanda kulungiswa futhi ine-glazing ephindwe kabili, ipompo yokushisa kanye ne-log-burner ukuze ihlale ine-toast ebusika. Phezulu kunekamelo elikhulu elinendlovukazi nombhede ongashadile, futhi kukhona omunye umbhede owodwa ku-mezzanine. Phansi indawo yokuhlala neyokudlela, nelinye igumbi lokulala elinombhede wendlovukazi. Kunekhishi elihlukile elifakwe ngokugcwele, eline-hob yegesi, ihhavini likagesi nazo zonke izinto ezisetshenziswayo ezintsha. Indlu yokugezela ineshawa enkulu kanti elondolo linomshini wokuwasha. I-chalet itholakala ehlathini lendabuko elinompheme omkhulu obheke eNyakatho onefenisha yangaphandle. Ebusuku ungezwa izinyoni eziningi zendabuko, kuhlanganise namaMorporks namaKiwi.
4.85 ·87 okushiwo abanye
4.85 out of 5 stars from 87 reviews
4.85 · 87 okushiwo abanye
Ukushushuluza e-Temple Basin, Cheeseman, Porter's njll, ukunyathela, ukugibela, ukuhamba ngezinyawo, ukudoba (imizuzu engu-20 ngemoto), i-internet cafe, indawo yokucima ukoma enikezela ngezidlo kanye nophethiloli/isitolo ebangeni lokuhamba ngezinyawo, isiteshi sesitimela (Tranz Alpine) kanye nolwazi lwePaki Ihhovisi le-DOC liyimizuzu emi-5 kuphela yokuhamba.
Asihlali e-Arthur's Pass kodwa sizotholakala ngomakhalekhukhwini ukuze sikusize nganoma yiziphi izinkinga phakathi nokuhlala kwakho.